အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ် တိုက်စစ်ကစားသမား အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့ လမ်းပတ် – MySport Myanmar
အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ် တိုက်စစ်ကစားသမား အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့ လမ်းပတ်
လက်ရှိ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ နဲ့ ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ် ကစားသမားဟောင်း ဖရန့် လမ်းပတ်ဟာ ပေါလ် စခိုးလ် နဲ့ ဒေးဗစ် ဆေးလ်ဗားကို ကျော်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမား (Attacking Midfielder) အဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ talksports သတင်းက ပရီးမီးယား သမိုင်း တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမား (၁၀) ယောက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ် ကစားသမား လမ်းပတ်က သွင်းဂိုး (၁၇၇) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၁၀၂) ကြိမ်နဲ့ အကောင်းဆုံး အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
Photo Credit: SportsBible
လမ်းပတ်ဟာ မန်စီးတီးအသင်းကို မပြောင်းခင် ချဲလ်ဆီးအသင်းမှာ ကစားခဲ့စဉ်က ကွင်းလယ်နေရာမှာ ကစားခဲ့ရပေမယ့်လည်း ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ သွင်းဂိုး အများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ သွင်းဂိုး အများဆုံး (၅) ယောက်မြောက် ကစားသမားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ သွင်းဂိုး အများဆုံး ကစားသမားတွေက အလန်ရှီယား (သွင်းဂိုး ၂၆၀ ဂိုး)၊ ရွန်နီ (သွင်းဂိုး ၂၀၈ ဂိုး)၊ အန်ဒရူး ကိုးလ် (သွင်းဂိုး ၁၈၇) ဂိုး၊ အဂွဲရို (သွင်းဂိုး ၁၈၀) ဂိုး) နဲ့ (၅) ဦးမြောက် ကစားသမားက လမ်းပတ် (သွင်းဂိုး ၁၇၇) ဂိုး၊ စသဖြင့် ဖြစ်ကြပါတယ်။
နည်းပြ လမ်းပတ်ဟာ ချဲလ်ဆီးအသင်းမှာ ကစားသမား အဖြစ် ကစားခဲ့စဉ်က အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိ ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ နည်းပြ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ အဆင့် (၄) နေရာ ရရှိနေတာကြောင့် နောက်နှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ နည်းပြ လမ်းပတ်ဟာ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို အပြောင်းအရွေ့ ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ အချိန်မှာ နည်းပြခဲ့ပြီး လာမယ့် အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက်မှာ ကစားသမားသစ်တွေ များစွာကို ဝယ်ယူဖွယ် ရှိနေပြီး ဇီယက်စ်ကတော့ အေဂျက်အသင်းကနေ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁. လမ်းပတ် – သွင်းဂိုး (၁၇၇) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၁၀၂) ကြိမ်
၂. ပေါလ် စခိုးလ် – သွင်းဂိုး (၁၀၇) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၅၅) ကြိမ်
၃. ဒေးဗစ် ဆေးလ်ဗား – သွင်းဂိုး (၅၄) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၈၃) ကြိမ်
၄. စတီဗင် ဂျာရတ် – သွင်းဂိုး (၁၂၀) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၉၂) ကြိမ်
၅. ဖာဘရီဂတ်စ် – သွင်းဂိုး (၅၀) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၁၁၁) ကြိမ်
၆. ဒီဘရှိုင်း – သွင်းဂိုး (၂၃) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၄၆) ကြိမ်
၇. ယာယာတိုးရေး – သွင်းဂိုး (၆၂) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၃၂) ကြိမ်
၈. မာတာ – သွင်းဂိုး (၅၀) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၅၁) ကြိမ်
၉. ကာဇိုလာ – သွင်းဂိုး (၂၅) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၃၅) ကြိမ်
၁၀. မိုဒရစ် – သွင်းဂိုး (၁၃) ဂိုး၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၁၅) ကြိမ်
MySport Myanmar2020-06-14T21:28:04+06:30June 14th, 2020|Football, News, Premier League|